I-Autopilot Iqalisa Imininingwane, iTracker Journey Yamakhasimende Yabathengisi | Martech Zone
NgoLwesithathu, Juni 7, 2017 NgoMsombuluko, Disemba 7, 2020 Douglas Karr
Ama-82% wamakhasimende ayeke ukwenza ibhizinisi nenkampani ngo-2016 ngemuva kwesipiliyoni esibi ngokusho Umbiko wakamuva we-Internet Trends kaMary Meeker. Ukuntuleka kwemininingwane nokuqonda kungavimbela abathengisi ukuthi bathuthuke emisebenzini yabo: idatha entsha ikhombisa ukuthi Ingxenye eyodwa kwezintathu zabathengisi ayinayo imininingwane futhi analytics badinga ukuhlola ukusebenza kwabo, futhi ama-82% athi angcono analytics kungabasiza bathuthuke emsebenzini wabo.
I-Autopilot Iqalisa Imininingwane
I-Autopilot isiqalise Ukuqonda - umkhondo wokuqina wokuqina wabakhangisi ubasize ukuthi basethe, balandele, futhi bafeze izinhloso Ukuqonda ibonakalisa izinhloso ezithile namamethrikhi abalulekile (ukubhaliswa kwe-imeyili, ukuya emicimbini, njll.), ukuthola ukuthi yimiphi imilayezo neziteshi ezisebenzayo, futhi esanda kusetshenziswa yiMicrosoft Developer Group ngaphambi konyaka wabo YAKHILE conference ukulandelela nokuhlangabezana nezinhloso zabo zokubhalisa.
Ukuqonda inikeza indlela yokuthi abathengisi bakwazi ukubona ngeso lengqondo futhi balandele ukusebenza kohambo lwamakhasimende abo bephikisana nomgomo, kufana nohlelo lokusebenza lokulandelela imfanelo. Ngemizuzwana engama-60, abathengisi bangalandelela iziteshi eziwinayo, amamethrikhi, nemiyalezo edingekayo ukuguqula imali engenayo ethe xaxa nokwenza ngcono umuzwa ongcono wamakhasimende.
phezu 700 I-Autopilot amakhasimende abambe iqhaza ekuhlolweni kwangaphambi kwesikhathi kwe-Insights, ngaphezulu kwengxenye ethi imininingwane ibasize kakhulu ukwandisa ukusebenza kohambo, kanti amaphesenti angama-71 athe manje azizwa ethembele kakhulu kumthelela wokumaketha kwawo.
Nge-Insights, ngikwazile ukubheka ama-minutia wesinyathelo ngasinye ohambweni lwethu futhi ngisebenzisa kahle obekusebenza. Kube kuhle impela ukuxhuma ukukhula okwenzekayo nomnyango wethu wokuthengisa ubuyele ohambweni lokunakekela e-Autopilot. UKevin Sides, i-CMO ye- Umkhumbi
Amakhono Okuqonda Okubalulekile afaka phakathi
Ukulandelela imigomo: Imininingwane isiza ukuhlanganisa amaqembu azungeze imigomo yebhizinisi ebalulekile ngokuvumela abasebenzisi ithuba lokuzakhela, ukufeza, nokwabelana ngezinjongo zabo zokuguqula uhambo ngokuchofoza okumbalwa.
Amamethrikhi wokuguqulwa: Ungalokothi ulahlekelwe ukugxila enjongweni yokugcina - ukuguqulwa. Gada izitayela zokuguqulwa ubone ukuthi ngubani, futhi ngokushesha okungakanani, umuntu oguqula kunoma yisiphi isiteshi kusuka ku-imeyili kuye kuposikhadi.
Ukusebenza kwe-imeyili okuhlanganisiwe: Bona ukuthi ama-imeyili akho asebenza kanjani futhi ahamba kanjani ku-roll up, ezingeni lohambo. Khomba izikhathi nezinsuku ezisemqoka zesonto ukuze uthumele ama-imeyili ngokubheka imiphumela ngokwenyuka okuhlukahlukene, futhi uze ujule njengokusebenza kwezinga lehora.
Khomba imilayezo ewinayo: Shayela imiphumela yomuntu ngamunye, yemilayezo eminingi ngosuku nosuku. Qhathanisa kalula izivivinyo ze-A / B bese unquma abawinile.
I-Autopilot yisoftware yokumaketha ebonakalayo yokwenza uhambo lwamakhasimende luzenzakalele. Ngokuhlanganiswa komdabu ne-Salesforce, i-Twilio, i-Segment, i-Slack, ne-Zapier kanye nekhono lokuxhuma kumathuluzi angaphezu kwe-800 enzelwe izinhloso, sinika abathengisi amandla okukhulisa ubudlelwano nokukhulisa amakhasimende akhokha kakhulu asebenzisa i-imeyili, iwebhu, i-SMS kanye neziteshi zeposi eziqondile .
Tags: Ama-Analyticsi-autopilotUkuhamba kwamakhasimendeukulandelwa kohambo lwamakhasimendeukulandela i-imeyilinokuqondasalesforceingxenyeukuxegaI-Twiliozapier